A mara Oppo Reno5 K 5G na Snapdragon 750G na 65W ngwa ngwa ụgwọ | Gam akporosis
A mara Oppo Reno5 K 5G na Snapdragon 750G na 65W ngwa ngwa
N'ime oge 2021 a, onye nrụpụta Oppo chọrọ ịdebe ụda nke ịmalite ngwaọrụ mkpanaka iji kpuchie mkpa niile nke ndị ọrụ. Companylọ ọrụ ka mara ọkwa na Oppo Reno 5 4G, Oppo A93 5G y Oppo A55 5G, ọnụ ụzọ atọ gbadoro na ntinye.
Taa ụlọ ọrụ ahụ na-ekwupụta Oppo Reno5 K 5G, ekwentị n'ime usoro 5 nwere mgbawa site na onye na-emepụta Qualcomm nke ga-enye gị njikọ 5G dị elu. Ama ama dara kpamkpam na njedebe dị elu n'ihi ihe niile mejupụtara, gụnyere ihe nhazi nke a na-eche maka egwuregwu na oke mma.
1 Oppo Reno5 K 5G, ekwentị na-arụ ọrụ dị elu
Oppo Reno5 K 5G, ekwentị na-arụ ọrụ dị elu
El Oppo Reno5K 5G bụ ekwentị dị elu, ọ na-eme egwuregwu 6,43-inch AMOLED panel na mkpebi Full HD +, ume ọhụrụ ma bịa na-echebe site na Gorilla Glass 5. Ihe ngebichi ihuenyo gafere 90%, yabụ bezels belatara nke ukwuu ozugbo anyị nwere aka.
Ihe nlere a na - enweta ihe nhazi Snapdragon 750G, mgbawa nke na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma na ihe ọ bụla ha tụbara na ya, tinyere Adreno 619 GPU. Ebe nchekwa RAM sitere na 8 ruo 12 GB nke RAM na nsụgharị abụọ, otu ahụ na-eme na nchekwa nwere nhọrọ abụọ: 128 na 256 GB.
Ọ na-egwu igwefoto azụ anọ, oghere bụ 64pipixels (6P), nke abụọ bụ 8 megapixel ultra-wide, nke atọ bụ nnukwu megapixel 2 na nke anọ bụ onye inyeaka miri emi. Igwefoto selfie ruru megapix 32, bụ otu n'ime ndị a na-ewere dị ike maka ọrụ ọ bụla.
Ihe ndabere na ekwentị ọ bụla bụ batrị ya, na Oppo Reno5 K 5G Otu ezigbo enweghị ike ịla n'iyi, na nke a, ahọpụtara 4.300 mAh. Ọ na-ekwe nkwa nnwere onwe zuru ezu iji were ya site n'ebe a gaa ebe ọzọ naanị otu ụgwọ, a kachasị ya mma dịka akụrụngwa yana yana egwuregwu ọ na-adịru elekere 10.
Fastgwọ ngwa ngwa ga-abụ 65WIchaji ya kpamkpam site na 0 ruo 100% ga-ewe ihe na-erughị ọkara elekere, oge ndekọ ma ọ bara uru ka ọ bụrụ otu n'ime ndị kachasị elu n'ahịa. Ọ ga-abụ site na USB-C, njikọta nke ga-enye ike ma jikọọ ndị na-ekwu okwu na mpụga, yana ekweisi.
Na mpaghara njikọta, ọ bụ otu n'ime njedebe kachasị ezu, ọ nwere 5G SA / NSA modem, ọ na-akwado njikọta 4G, na mgbakwunye inwe Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, Dual SIM na 3,5 mm minijack. Ihe mkpisiaka na-agụ ga-abịa n'okpuru ihuenyo, ọ na-ekwe nkwa a pụtara ngwa ngwa omume oge.
Oppo Reno5K 5G Ọ na-abịa na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google, ọ bụ Android 11 na mmelite kachasị ọhụrụ na sistemụ a maara nke ọma. Omenala ahụ bụ ColorOS 11 nwere ọtụtụ mmụba, mgbanwe ịchọ mma dị ezigbo mkpa, yana nhọrọ dị n'ime.
IKIRU 6.43-inch AMOLED nwere mkpebi Full HD + 90 Hz na-enye ume ọhụrụ / Gorilla Glass 5
Nhazi Ihe nhazi Snapdragon 750G
Kaadị grafik Adreno 619
Nchekwa n'ime 128 / 256 GB
Gbanwee CAMERA 64 MP Isi ihe mmetụta / 8 MP Ultra Wide Sensor / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Omimi ihe mmetụta
N'ihu CAMERA Ihe mmetụta 32 MP
OS Gam akporo 11 na ColorOS 11
UMUAKA 4.300 mAh na 65W ngwa ngwa
Njikọ 5G SA / NSA / Wi-Fi 802.11 ac / GPS / Bluetooth 5.0 / Dual SIM / 3.5mm Minijack
Mbibi na ibu ibu 159 1 x 73 4 x 7 9 mm / 180 grams
Emeputa Oppo ekwuputala ụdị Reno5 K 5G na nsụgharị abụọ: 8/128 GB na 12/256 GB na ọnụahịa ka ga-ekwenye. Bọchị mwepụta a maara, ọ ga-abụ 8 Machị mgbe ebido ya na China na agba anụnụ anụnụ na oji. Amaghi nnweta zuru ụwa ọnụ n'oge a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A mara Oppo Reno5 K 5G na Snapdragon 750G na 65W ngwa ngwa
Samsung malitere site na nkenye nke otu UI 3.1 na Galaxy Note10
Etu esi etinye ngwa gam akporo na Wear OS